महिलाहरुसंग अंगालो हाल्दै नाँचे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी !(भिडियोसहित) - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
महिलाहरुसंग अंगालो हाल्दै नाँचे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी !(भिडियोसहित)
एजेन्सी– आध्यात्ममा निकै धेरे विश्वास गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महिलाहरुसंग छलछमी नाँचेको भिडियो संसारभर भाइरल भएको छ । पछिल्ला वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे विभिन्न बहसहरु हुने गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर नेपालीहरुको मन दुखाएका उनले योपटक भारतमै भारुका केही नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अर्को चर्चा कमाइरहेका छन् । त्यस्तै, भर्खरै भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको अर्को चर्चा सुरु भएको छ, यसबेला भारतीय सामाजिक सञ्जालमा उनको अनौठो नाचसहितको भिडियो भाइरल भैरहेको छ ।
सन्दर्भ अगाडीको हो । एकदशक अघि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको घरमा होली नाच चलिरहेको थियो । त्यसबेला नरेन्द्र मोदी गुँजरातका मुख्यमन्त्री थिए । सो समारोहमा उनलाई पनि डाकिएको थियो । त्यसैबेला होली नाचमा महिलाहरु पनि कम्मर मर्काइ–मर्काइ नाचिरहेका थिए । त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री वाजपेयी र मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सँगै नाच्न थाले । सो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ ।
मोदी नाँचेको दुर्लभ भिडियो यस्तो छ ।